कसरी किंडरगार्टन लागि बच्चा छाँटकाँट गर्न? सम्भव समस्या र आफ्नो समाधान
हरेक परिवार मा ढिलो होस् वा पछि समय एक संस्थाले एक बच्चा दिन आउँछ। कारण व्यापक फरक हुन्छन्। अक्सर, मेरो आमा बस समय बाल हेरविचार लागि बिदा को अन्त गर्न आउँदै देखि काम गर्न जाने। स्वभाव र घर को बानी सबै बच्चाहरु फरक छन्, त्यसैले तिनीहरू लागि नयाँ वातावरण साथै विभिन्न तरिकामा बोक्न: कसैले सजिलै प्रयोग हुन्छ र शिक्षक र अन्य बच्चाहरु संग सम्पर्क मा आउछ, तर अरूको लागि यो प्रक्रिया पीडादायी छ।
बाल सदन लागि बच्चा छाँटकाँट गर्न कसरी प्रश्न, यो लेख समर्पित हुनेछ।
किन आमाबाबुले किंडरगार्टन मा साना बच्चाहरु दिन
केही परिवार मा, बच्चा तीन उमेर अघि किंडरगार्टन दिइएको छ। यो धेरै कारण गर्न सकिन्छ:
बच्चा आफूलाई शाब्दिक आफ्नो आमाबाबु लिन बनाउँछ जो बगैचा, मा प्राप्त गर्न त उत्सुक;
त्यो केही महिना यो प्रारम्भिक आफ्नो crumbs टिप्न सक्षम हुनेछ भन्ने हो जो सेवा, जाने छैन थियो किनकी, मिलाइएको अवधि सामना र यो बच्चा मदत गर्न सजिलो आमा;
परिवार धन को छोटो छ, र बाल सदन मा खाना धेरै वैविध्यपूर्ण र उच्च-क्यालोरी घर, र बढि छ।
जो प्रत्येक मामलामा यो राज्य संस्थाले उनको बच्चा हरेस कारण, आमाबाबुले बच्चाको मिलाइएको को किंडरगार्टन को सुविधाहरूमा, बच्चालाई लागि नयाँ शर्तहरूमा विचार गर्नुपर्छ। केही बच्चाहरु मा, यसलाई अझ राम्रो, उत्तेजित गर्दछ अरूलाई - खत्तम, तर अन्त मा बच्चाहरु को 99% सफलतापूर्वक जीवनमा परिवर्तन गर्न अनुकूल छन्।
बच्चाहरु को लागि एक किंडरगार्टन भन्दा उपयोगी
सुरु स्कूल उमेर जस्ता समय सम्म, आमाबाबुले वास्तवमा बच्चा लागि एकमात्र अधिकार हो। तर यो तीन उमेर बच्चा Communicative र पारस्परिक कौशल विकास गर्न, साथीहरूको साथ socialize सुरु गर्नुपर्छ भनेर याद गर्न महत्त्वपूर्ण छ। बाल सदन पूर्ण अवसर धेरै प्रदान गरेर यो समस्या copes। मुख्य समस्या सर्वश्रेष्ठ बाल सदन लागि बच्चा छाँटकाँट गर्न कसरी प्रश्न छ।
पेशेवरों बच्चा समुदाय:
सिक्न र आत्म-सेवाको कौशल बुझ्न धेरै सजिलो साथीहरूको बच्चाहरु को टोली: व्यक्तिगत स्वच्छता सिक्न, सफाइ कुराहरू र खिलौने लागि लुगा धारण गर्न, बनाउन सिक्न।
गठन संचार कौशल किंडरगार्टन छोराछोरीको रहन कारण, बच्चाहरु खातामा साधारण चासो लिन र अन्य बच्चाहरु संग सहयोग मा काम गर्न सिक्न। बाल सदन मा बच्चा को सफल मिलाइएको छोराछोरीलाई यी कौशल को विकास, एकल परिवारको लागि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ।
सानैदेखि स्थापना "म - मेरो" समझ जान्छ "हाम्रो -। सामान्य ' बच्चाहरु खिलौने साझेदारी गर्न, स्वेच्छाले अरूलाई मदत गर्न थाल्छन्।
बच्चाहरु बोली, तार्किक सोच, सांगीतिक क्षमता र कलात्मक झुकाव को तीव्र विकास गर्न योगदान जानकारी र अनुभव को एक किसिम प्राप्त।
आमाबाबुको लागि सुझाव: लागि बाल सदन एक बच्चाको मिलाइएको
चाँडै बाल सदन आफ्नो बच्चा लिन जाँदै छ जो हरेक आमा, अग्रिम मा मिलाइएको अवधिमा बच्चा मदत गर्ने प्रक्रिया विचार गर्नुपर्छ। त्यहाँ केही सुझावहरु मनोवैज्ञानिक र यो मुद्दा मा शिक्षकहरू छन्:
यो आवश्यक छैन व्यवस्था छ बच्चाहरु को लागि एक आश्चर्य को किंडरगार्टन देखि। हामी उहाँले त्यहाँ र यति मा के गर्नेछ, त्यो थियो जहाँ बच्चाहरु व्याख्या गर्न अघि बढाउन प्रयास गर्नुपर्छ।
यो बगैचा मा अपनाए बच्चाहरु को विकास को लागि अनुमानित कार्यक्रम जान्न र यसको प्रमुख क्षणमा संग बच्चा चिनाउने थाले मनमोहक छ। यो बाल सदन गर्न बच्चाको मिलाइएको सुविधा कसरी मुद्दा सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
सबै व्याख्या बच्चा बगैचा चासोको विषय गर्न सकारात्मक मनोवृत्ति संग, सकेसम्म सरल हुनुपर्छ।
एक घर किंडरगार्टन अर्को हो भने, तपाईं अक्सर यसको क्षेत्र मा हिंड्न।
खराब छैन अग्रिम संग शिक्षकहरूलाई, समूह डायल भेट्न र crumbs तिनीहरूलाई चिनाउने। र राम्रो बच्चा शिक्षक सिक्छन् उहाँले एक आमा बिना उसलाई बाँकी अघि, त्यसैले यसलाई भविष्यमा सजिलो हुनेछ।
बगैंचामा गएर किंडरगार्टन गर्न बच्चा अनुकूल लागि यी सुझावहरू ध्यान गर्नुपर्छ अघि बच्चालाई स्वास्थ्य बलियो बनाउने सन्दर्भमा:
सबै को पहिलो यो नयाँ भाइरस संग आपतकालीन बैठक गर्न बच्चाको प्रतिरक्षा प्रणाली तयार गर्न आवश्यक छ। सायद, यो टुकडा अझै पनि बिरामी हुन केही समय हुनेछ।
परिवार को गर्मी मा आराम गर्न जाने हुँदा acclimatization चिन्ता छैन गर्न, स्थायी निवास को क्षेत्र मा उपलब्ध छ जो जलवायु क्षेत्र, सबै भन्दा राम्रो गर्न प्राथमिकता दिन। यदि समुद्र गर्न योजना यात्रा, यस्तो तरिकाले गणना हुनुपर्छ (अक्सर सात दिन को सट्टा हुन्छ) छोड्न बच्चा एक महिना लागि तट मा छ कि। यसलाई कसरी crumbs को प्रतिरक्षा प्रणाली, पूर्ण क्षमता मा चलिरहेको रूपमा परिवर्तन गर्न अनुकूल, स्वास्थ्य मा किंडरगार्टन लागि बच्चा अनुकूल थाहा महत्त्वपूर्ण छ, र यसको सट्टा गिरावट निको को पहिलो पाँच दिनमा हुन्छ। त्यसैले, वित्तीय वा अन्य कुनै पनि कारण समुद्र मा बच्चा र तीस दिन प्रदान गर्न सक्षम छैन भने, यो राम्रो (बच्चा किंडरगार्टन धाउन सुरु गर्दा कम से कम, वर्ष मा) सबै आफ्नो यात्रा त्याग्न छ।
यो हेरविचारकर्ताओं लागि सजिलो कसरी बनाउने
बस आमाबाबुको लागि किंडरगार्टन छोराछोरीलाई एक ठूलो समस्या मिलाइएको हो भन्ने लाग्छ छैन। शिक्षकहरू लागि यो पनि एउटा जटिल प्रक्रिया हो, र आमाबाबुले तिनीहरूलाई र छोराछोरीलाई मदत गर्न सक्छ। यसलाई निम्न सम्झना गर्न आवश्यक छ:
शिक्षकहरू यो गर्न सबै आवश्यक कौशल संग बच्चा सिकाउन आवश्यक छ कि लाग्छ छैन। आफ्नो आमाबाबु को यो बच्चा, र यो हुन आफ्नो सीप घरमा प्रदान गर्नेछ थप स्वतन्त्र, को सजिलो नयाँ वातावरण गर्न मिलाइएको आयोजित गरिनेछ।
आफ्नो भ्रमणको सुरु गर्नु अघि कम्तिमा दुई महिना, बाल सदन मा पारित दिन को घर मोड पालन गर्न सुरु गर्नुपर्छ, यो बच्चा, आदेश कार्यहरू एक निश्चित प्रणाली प्रयोग गर्न साथै यी कार्यहरू बाहिर हुनुपर्छ जसमा क्रममा थियो। यो बाल सदन लागि बच्चा छाँटकाँट गर्न कसरी समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न सजिलो छ।
हामी सामाजिक मामलामा आफ्नो बच्चा विकास गर्न सुरु गर्न सकेसम्म प्रयास गर्न आवश्यक: प्रश्न र तिनीहरूलाई जवाफ सक्षम हुन सही कुरा गर्न कौशल उहाँलाई खोप दिनु। यो क्लब प्रारम्भिक बाल्यकाल विकास भ्रमण गर्न उपयोगी छ।
को मिलाइएको अवधिको अवधि
धेरै आमाबाबुले कसरी लामो किंडरगार्टन गर्न बच्चाको मिलाइएको छ प्रश्न, रुचि राख्नुहुन्छ। यति मात्र होइन वयस्क मा तर पनि एउटा संस्थाले मा अभियान को पहिलो दिनको लागि तयारी को बच्चा को प्रकृति, साथै यसको वातावरण र अवधि निर्भर रूपमा गर्न unequivocal जवाफ, छैन। उदाहरणका लागि, त्यहाँ विशेष अनुकूलता क्लब, तपाईंले आफ्नो बच्चा दिन सक्छ जहाँ तपाईं किंडरगार्टन उहाँलाई जाने सामु छन्।
यो बच्चाहरु को क्लब प्रारम्भिक विकास, घर गर्न घनिष्ठ, केवल एक बच्चा यस्तै उमेर उपस्थित कि जस्तो लाग्न सक्छ। सुरु गर्न, यो उपयुक्त छ, तर एक महिना पछि संस्थाले परिवर्तन हुनेछ।
उमेर 5-7 जहाँ आमाबाबुले पहिलो 1-3 सत्र मा मात्र अनुमति बच्चा बच्चाहरु को एक औसत उपस्थिति संग आदर्श समूह, र त्यसपछि छोराछोरीलाई आफूलाई सामना। प्रतीक्षालयमा, आफ्नो बच्चा को सिक्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्दा खराब छैन भने, निगरानी आमाबाबुले बाहिर छ भने, र हुनेछ। नयाँ वयस्क पालन यस कौशल privot बच्चाहरूमा साथीहरूको साथ socialize र बिस्तारै नयाँ microflora भेट्न प्रतिरक्षा प्रणाली तयार।
बाल सदन लागि कहिलेकाहीं तीन चार महिनाको अवधिको सम्म, महिना भन्दा बढी ठाँउ लिन्छ जवान छोराछोरीको राम्रो मिलाइएको र छुटेको केही Kiddies र सप्ताह को एक जोडी।
हरेक आमा को लागि उनको बच्चा, सबै भन्दा राम्रो सबैभन्दा प्रिय र सबै भन्दा आज्ञाकारी छ। उहाँले गाली गर्दैन वा घरमा बदमास, सबै अनुरोध पूरा र मद्दत गर्छ आमा समयमा सुत्न जान्छ र एक्लै प्ले। तर यहाँ बच्चा किंडरगार्टन गए, र कुराहरू पहिचान परे परिवर्तन: बच्चालाई, त्यसको विपरीत, रुन थाले, वा गिर मौन सबै, सहयोग गर्न, आफ्नै पोशाक वा पोशाक उतार लेना रोकियो, सायद उहाँले पनि काट, आफ्नो आमा पिटे र भाँडा पिट्न थाले, potty झुन्डियो भूल ...
सम्भव परिवर्तन सूची अनिश्चितकालीन जारी गर्न सकिन्छ। यो नयाँ वातावरणमा बच्चा को निरन्तर मिलाइएको एक सबै साइन छ। अलार्म ध्वनि छैन यो मूल्य, सबै कुरा प्राकृतिक र अपेक्षित छ।
के व्यवहार परिवर्तन भएको छ भने
धेरै मिलाइएको कसरी किंडरगार्टन लागि बच्चा लिन्छ बिना आमाबाबुले चाँडै बच्चा को व्यवहार मा परिवर्तन देख्नु गर्न सुरु हुनेछ। र निम्न सुझावहरू यहाँ उपयोगी हुन सक्छ:
पहिलो कुरा मनोवैज्ञानिक सल्लाह कि - रोगी हुन। , छोराछोरी, रुन व्यवहार को शैली परिवर्तन (तीन महिना दुई हप्ता देखि) पहिलो पटक, आक्रामक हुन्छन्। तिनीहरूले सामान्य सहज सुरक्षित वातावरण को तोडफोड विरुद्ध protesting छन्।
अचानक एक किंडरगार्टन मा एक बच्चा नछोड। सानो मान्छे सजिलै नयाँ कुरा संग टाढा बोक्न र उहाँले नयाँ खेलौना द्वारा चासो आँसु र चीखें बिना समूह, जान इच्छुक थिए। तर आमा बिदा, बच्चा बगैंचामा को मात्र उल्लेख मा hysterics मा अर्को दिन जान सक्नुहुन्छ भन्दै बिना यस्तो व्यवहार छोड्न हुनेछ को सुख मा छ भने। जहाँ मेरो आमा अघिल्लो दिन, को किंडरगार्टन गर्न बच्चाको मिलाइएको को समस्या exacerbated हुन सक्छ जो मामला मा गायब उहाँले बुझ्न छैन।
सायद आमाबाबु र मानसिक, र शारीरिक गर्न टुकडा छडी, र केवल एक गर्जन संग दिनु हुनेछ। यो जीवन को एक पनि आकस्मिक परिवर्तन गर्न एक सामान्य प्रतिक्रिया हो। तुरुन्तै पुरा दिन को लागि बच्चा छोड्ने छैन। राम्रो पहिलो - एक घण्टा वा दुई, र त्यसपछि खाजा अघि। पहिले नै दोस्रो हप्ता देखि, तपाईं यसलाई सबै दिन छोड्न सक्नुहुन्छ।
तीन वर्षको उमेरमा सन्तानको भन्दा अझै व्याख्या, notations र कराउछ बुझ्न छैन। तिनीहरू सबै सिक्ने प्ले मार्फत हुन्छ, र यो सुविधा आफूलाई फाइदाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ र चाँडै किंडरगार्टन लागि बच्चा छाँटकाँट गर्न कसरी विचार।
बच्चा संग एक निश्चित नियमित पूरा गर्नुपर्छ भूमिका-प्ले "माउस-बच्चा भ्रमणमा किंडरगार्टन" (टुकडा माउस को सट्टा लिएको सकिन्छ कि कुनै पनि खेलौना भन्दा प्रेम) संग। बगैंचामा गर्न बच्चालाई सुरक्षा, सुविधा र चासो को एक अर्थमा कल गर्न - यो खेल को उद्देश्य। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो - तिमी खेल्न समय छैन भने, यो राम्रो माउस-बच्चा हरेक नयाँ खेल आवश्यक मेरो आमा, अंगालो, चुम्बन र घर शीर्षक को आगमन अन्त्य हुनु पर्छ किनभने यो, आज सुरु गर्न छैन। यो याद र कसरी किंडरगार्टन लागि बच्चा छाँटकाँट गर्न बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ।
यसलाई कुनै पनि सम्झना राम्रो छ शासन क्षणमा (हात धुने, पैदल), तपाईं मेरो आमा को साँझ आगमन सम्म खेल रोक्न। तपाईं साथै माउस-बच्चा बताउन उहाँले त्यहाँ जान्छ किन बगैचा, तपाईंको बच्चा प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। को बच्चा माउस दाजु / बहिनी हुनेछ गरौं र रक्षा हुनेछ। यस समयमा आमाबाबुले तपाईं बच्चा भन्न रहेको छ के धेरै ध्यान दिएर सुन्न आवश्यक छ। अक्सर, खेलौना आग्रह, छोराछोरीले समस्या र अनुभव, र आफ्नो बच्चा को समझ वर्णन, तपाईं राम्रो उहाँलाई मिलाइएको कठिनाइको बच्न मदत गर्न सक्छ।
यो बाल सदन लागि बच्चा छाँटकाँट गर्न सजिलो छ
निम्नानुसार मिलाइएको समस्या मदत:
बच्चा घर खेलौना तिनीहरूलाई (यदि यो बगैचा मा निषेधित छैन) अर्को दिन लिन उहाँले तिनलाई मेरो लकर, खाट, उच्च कुर्सी देखाउन हुनेछ अनुमति दिनुहोस्। यस मामला मा यो सिर्फ एक खेलौना तर घर को एक टुक्रा, आमा विकल्प छैन किनभने, वर्ग प्रत्येक अन्य अर्को मनपर्ने बिरुवाहरु गरौं।
, रहलपहल लागि एक विशाल तनाव उहाँले बाहिरबाट यसलाई देखाउँछ छैन भने पनि - को शिशु विद्यालय गएर। उहाँले मा र शिक्षकहरूलाई आराम गर्न सक्दैन, गलत कुरा गर्न डर। यस कारण, त्यो घर पुगेपछि बच्चा capricious हुन सक्छ - उहाँले दिन को संचित तनाव "बन्द लिन्छ।" शारीरिक गतिविधि बच्चा खेल वृद्धि को माध्यम द्वारा यो सम्भव सामना गर्न।
बच्चा टिप्न जाँदै, तपाईं एक फुटबल बल संग लिन, वा, कुकुर छ जसले तपाईंलाई संग मित्र अनुरोध गर्न सक्छ। बच्चा आमाबाबुको साथ आउटडोर खेल खेल्न वा बाहिर कुकुर चलाउन धेरै खुसी हुनेछन्। तसर्थ, उहाँले तनाव, थकित फेंक र सजिलै सुत्न जाने।
हामी किन निद्रामा चाहिन्छ
बाल सदन लागि बच्चा छाँटकाँट गर्न कसरी को प्रश्नको जवाफ, तपाईं निद्रामा लागि पर्याप्त समय को महत्व थाहा हुँदैन। यो बच्चा अधिक सोता राम्रो। पहिलो पटक, त्यो माथि रात मा, रो, उठाउनका सक्छ चिच्याउने, डर त्यो अर्को समय लाग्न भन्ने छैन टाढा मा आमा फेंक। पहिलो दुई हप्ता मा, छोराछोरीलाई अक्सर को, तपाईं शिक्षकहरूलाई संग सम्पर्क खोजी छैन, विशेष गरी यदि सपना। रोगी हुनु पर्छ - यो पारित हुनेछ।
सुत्दा, शरीर खण्डमा र भावनात्मक र शारीरिक बल दुरुस्त, त्यसैले यो समय धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसैले कसरी आफ्नो व्यवहार, सबै आमाबाबुको पर्छ पहिलो किंडरगार्टन गर्न बच्चाको मिलाइएको सुविधा त र यस कठिन समयमा यो धेरै निर्भर गर्दछ। अक्सर, तिनीहरूले बाल को दीर्घ मिलाइएको लागि दोष हो।
तिनीहरूले खराब व्यवहार सबै नातेदारहरु संग छलफल गर्न भने दुरुपयोग वा किंडरगार्टन शिक्षक को बच्चा मा, आफ्नो बगैचा को डर, र राम्रो जो कोहीले नदेखाउनुहोस् छन् भने, त्यसपछि बच्चा गुणा गाह्रो हुनेछ। उहाँले दोष छैन, समर्थन आवश्यक र यो व्यवहार मेरो आमा को विश्वासघात छ ठान्नुहुन्छ।
आँसु बारेमा सबै भूल र बस खेल ध्यान भंग, तिनीहरूलाई ध्यान छैन राम्रो छ। crumbs को उपस्थिति मा किंडरगार्टन, शिक्षक र अन्य कार्यकर्ता प्रशंसा गर्न आवश्यक छ। बच्चालाई, एक हप्ता एक महिना मा जो पनि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ आज भएको सफलता, adapts कसरी राम्रो के (albeit सानो) वर्ष को अन्त द्वारा ध्यान केन्द्रित गर्न। यो चाँडै किंडरगार्टन लागि बच्चा छाँटकाँट गर्न कसरी समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ।
तपाईं विदाई को यसको आफ्नै विशेष अनुष्ठान र बच्चा संग एक बैठक साथ आउन र तिनीहरूलाई विवरण छलफल र पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाउन आवश्यक छ। तिनीहरूले उहाँलाई लागि आउँदा त आफैलाई ओछ्यानमा जाने बानी आँसु बिना अलविदा भन्न बच्चा, लागि, caregiver समय बन्द।
सफल मिलाइएको बच्चा गर्न प्रमुख - सकारात्मक अन्त परिणाम अभिभावकहरूको मन को शान्ति। बाल "यस्तो लेखिएको छ" जानकारी नै calmer बन्नेछ। तसर्थ, आमा छोराछोरीको आँसु मा छैन हेर्न सक्छन् भने थप के, सबै तिनीहरूले ठेगाना subconsciously आशा समय, पहिलो महिना गरौं वा बच्चा को दुई पिताजी वा अर्को, परिवारको tranquil मुड थप diverts।
आमाबाबुले Reima द्वारा Lassie चयन गरिएका छन्। सबै समय मा Overalls!
समीक्षा, फोटो: 1 वर्ष देखि बच्चाहरु को लागि व्हीलचेयर-मिसिन
तपाईं बेबी Strollers छनौट गर्दा के थाहा गर्नुपर्छ
पुरुष र महिला लागि घर मा dumbbells संग अभ्यास को सेट
ज्याक लन्डन "जीवन को प्रेम": मुख्य वर्ण एक सारांश
बैजनी भान्सा गर्न, बेडरूम मा पर्दे। को भित्री (फोटो) मा बैजनी रंग को पर्दे
को Staffordshire टेरियर पिट साँढेको देखि फरक के छ? फोटो
कसले तुला राशि साइन लागि उपयुक्त छ?
कजान वास्तुकला र निर्माण विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय: इतिहास, शिक्षा संकाय
प्रिय पति खुसी कसरी केही सुझावहरू
ODE घर केक
Pyrolysis ओवन। यो के हो?